Yuunivarsiitii Goondar: Bartoonni waggaa 6ffaa mooraa gad lakkisanii bahan - BBC News Afaan Oromoo
Yuunivarsiitii Goondar: Bartoonni waggaa 6ffaa mooraa gad lakkisanii bahan
23 Caamsa 2019
Image copyright Gonder University 2010 Batch FB
Goodayyaa suuraa Mooraa yuunivarsiitii Gondar
Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar gaaffii isaan irra deddeebiin gaafatan deebii argachuu dhabuu isaatiin mooraa akka gad lakkisanii bahan BBC'tti himaniiru.
Barattoonni BBC'n dubbise akka jedhanitti kaleessa barattoonni muummee barnoota fayyaa ykn mediisinii 250 ta'an mooraa gadi dhiisanii bahaniiru.
Baratoonni kuneen akka jedhanitti gaafiilee isaan ji'a torbaaf gaafataa turan deebii argachuu dhabuu isaaf mooraa keessaa akka bahan himaniiru.
Barataa Taarikuu Worquu akka jedhetti meeshaalee dhukkubsataa ittin yaallu gahaa ta'uu dhabuun isaaniifi ilaalchi hawaasni ogummaa fayyaarratti qabu karaa dogogoraan akka hubatamu godhuun isaa sababoota hedduu keessaa tokko jedheera.
Barattoota fayyaa irratti 'tarkaanfiin fudhatamuufi'
Mormiin ogeeyyii fayyaa attamiin eegale, eessa gahe?
"Tajaajila baqaqsanii yaaluufiyyuu gaawuntii mana qorichaatii kan deemne bitannu" kan jedhu barataan kun barnoonni fayyaa sirna barnoota mataasaa kan qabu ta'us isaan garuu sirnichaan ala akka hojjataa jiran qeeqa isa ibsa.
Dabalataan haal dureewwan sirna barnoota irra jiran hojiirra oolchuu dhabuu keenyarra kan ka'e dandeetiin keenya gad bu'aa jira jedha.
"Sirni barnoota yaala baqaqsanii yaalu kan lubbuu dhukbsataaf yaaddo hin taane akka hojjannu nuu hayyamus irratti hojjachuudhaaf garuu carraa hin araganne. Hojii ogummaa keenyaan ala ta'e kan hojjachaa jirru jechuun fakkeenya kaasa. Kanas "Garbummaa Ammayaa" jechuun moggaasa akka kennaniif hima.
Umurii keenyaa guutuu kan barnootaaf kennine hojii namni hin baranne kamuu hojjachuu danda'u hojjachuuf akka hin taane dubbata.
Sa'aatii 36 akka hojjatan kan dubbatan baratoonnni kunnen hospitaalli mootummaa kutaa boqonnaa itti fudhatan waan hin qabneef ji'oota torbaaf haala kanaan hojjachaa turuu isaani ni yaadata.
Yaada Taarikuu kan deeggartu barattun Fireehiwoot Alamuu immoo torbee lama keessatti gaafiin isaanii akka deebii argatu itti himamus deebii argachuu dhabuu isaanii dubbatti.
'Hojjetoonni fayyaa mirga hojii lagachuu hin qaban'
Kanarraa kan ka'een lagannaa hojii dhaabuu godhaniiru. Gaafii isaanii deebisuuf qaamni dhimmi ilaallattu hordofaa turus waan hin milkoofneef xalayaan mooraa gad dhiisanii akka bahan ibsu maxxafamuu himti.
Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif kan gaafanne Daayirektarri Daayirktoreetiin Quunnamtii Idil Addunyaa Aadde Yiddanyuu Maandafiro dhimmichi akka biyyaatti ta'usa yaadachuun, dhimmoonni isaan kaasa kudhan akka ta'es dubbattu.
Akka Aadde Yiddanyuus jedhanitti yuunivarsiitichi gaafii mootummaa fedaraalaan deebii argachuu qaban gara dhimmi ilaalatuuf dabarsuu isaaniifi kan yunivarsiitichi deebiisuu danda'uu immoo yeroo garagaraatti maariin geggeffamuusa himu.
Yeroo sanitti gaafii isaanii irraa fuunee lagannaa barnootafi hojii dhaabuu akka hin jiraanne walii galle turrus barattoonni garuu gara lagannaa hojii dhaabuutti deeman jedhu.
Ta'us bakka hoggantoonni yuunivarsiiticha argamanitti mariin geggeeffamee akka deebii'an al-sadi bahus, baratoonni waan hin deebineef baratootarratti tarkaanfiin akka fudhatamu danda'u addee Yiddanyuu dubbattu.
Kana boodas mana maree yuunivarsiitichaa baratoonni akka mooraatti deebi'an waamicha godhe bartoota hin deebineerratti tarkaanfii hamma waggaa tokkoo barnootarra ari'aman xalayaa ibsu baasera jedhu.
Baratoonni akka barnootaafi hojii isaanitti akka deebi'an yuunivarsiitichi yaali garagaraa godhus baratoonni gara hojii deebi'uu dhabuu isaani dubbattu. Kanarra kan ka'e tarkaanfii akka irratti fudhatamu BBC'tti himaniiru.
Barattoota fayyaa barumsatti hin deebi'in irratti tarkaanfiin akka fudhatamu 'qajeelfamni darbe'
19 Caamsa 2019
Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa magaalota adda addaatti hiriira, mariirra jiru
17 Caamsa 2019
Oromiyaa iddoo adda addaatti namoonni hidhamaa jiru
"Abdiisaa Nagaroo Amborraa"
Talaalliirraa amantaa dhabuun 'rakkina addunyaati'
Baayyinni namoota buqqa'anii mil. 70 ol gahe
Awustiraaliyaan namni 'sperm' arjoome abbaa seera qabeessa daa'imaati jette
Traamp bara 2020'tti irradeebiin filatamuuf duula eegalan
Kantiibaan magaala Naqamtee komaand Postiin qabaman
Abbaan MM Abiy Ahimad du'aan boqotan